UKUHLAMBA IMARBLE (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ukuhlamba iMarble (Isikhokelo soYilo)
Apha sabelana ngesikhokelo sethu sokuyila semarble kubandakanya ukulunga kunye nokubi, kunye nendlela yokuyinyamekela le nto intle.
Imarble lilitye lendalo eliye lazisa ubuhle emakhayeni ethu kangangeminyaka. Inika iindidi ngohlobo lwemibala eyahlukeneyo enje ngwevu, mhlophe, kunye ne-beige, tyheli, okanye luhlaza! Nokuba ngowuphi umbala owukhethileyo, imarble iqinisekile ukuzisa inqanaba lokunethezeka ekhayeni lakho.
Xa ujonga i-marble, kukho iindlela ezahlukeneyo zokuyisebenzisa ejikeleze ikhaya. Ukusetyenziswa okuhle kakhulu kukuguqula ishawari yakho ibe yindawo entle yemabhile kwaye apha, siza kuxela yonke into oyifunayo malunga neso sigqibo.
izimvo zencwadi yeendwendwe ezingezizo ezemveli
I-Marble Shower Pros kunye ne-Cons
Iiphaneli zodonga lweMarble Shower
Umgangatho weMarble Shower
Iindonga zeMarble Shower
Iteknoloji yokuThengisa iMarble
Ikhuliswe ngePan Marble Shower Pan
Ukuhlamba iitayile zeMarble
Ulondolozo lweMarble Shower
Njengolunye ukhetho loyilo, ishawari semarble siza kunye nokuqwalaselwa okuthile. Into yokuqala ekufuneka uyazi ukuba zeziphi izinto ezilungileyo nezingalunganga zokufaka ishawari semabhile kwindawo yakho yokuhlambela.
Iprojekti yokuqala yeshawari yemarble icacile. Ngokubonakalayo, imarble intle kakhulu. Inokuphakamisa igumbi lokuhlambela lakho kwinqanaba elihle. Ngexesha elifanayo, akuyiyo uyilo olulodwa. Enkosi kuluhlu lweepateni ezenziwe ngokwendalo, unokuba ne ishawa yangasese loo nto yahlukile.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele kukuba kukho ukungaqondi kakuhle ukuba i-marble ilunge ngakumbi kuyilo lwangaphakathi lwendabuko. Ngelixa i-marble kukuchukumisa okunethezeka kuyilo lwesiko, alukhawulelwanga kuyilo lwesiko. Umzekelo, imibala emhlophe eqaqambileyo okanye emhlophe yemabhile inokuba sisincedisi esihle kuyilo lwangoku.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukugcina imbonakalo entle yemabhile, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyasebenza ukuyigcina ikwimeko entle. Umzekelo, ukuba ulahla unodoli weashampoo okanye isimemo kwimarble, kuya kufuneka uyisule kwangoko ukunqanda ukubola. Kuya kufuneka ulumkele into oyisebenzisayo ukucoca i-marble shower yakho kodwa siza kujonga ngakumbi indlela yokugcina i-marble shower yakho icocekile emva kwexesha.
Kukho ulondolozo oluyimfuneko kunye nemarble shawa. Ngokufanelekileyo, imarble kufuneka iphinde ithengiswe kube kanye ngonyaka. Ngethamsanqa, unokufumana iimveliso zokutywina ozifunayo malunga nayo nayiphi na ivenkile yehardware ukugqibezela umsebenzi ngokwakho ngombutho onobuhlobo.
Okokugqibela, kukho ipro pro kunye nexabiso lemarble. Kwelinye icala, lixabiso elikhulu ngaphambili xa kuthelekiswa nezinye izinto. Ngakolunye uhlangothi, ngelixa lutyalo-mali olukhulu ekuqaleni, luyabhatala ekuhambeni kwexesha kuba sesinye sezona zinto zihlala ixesha elide onokuzisebenzisa xa uhlamba.
Xa ufaka i-marble kwindawo yakho yokuhlamba, unokhetho olwahlukileyo kwindlela owenza ngayo oko. Ngokufanelekileyo, abantu abaninzi bathintela ukhetho ekusebenziseni iiphaneli zodonga lweemarble okanye ukusebenzisa iithayile zemabhile.
Iiphaneli zemarble zikhethwe ngabaninzi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Kwenye, akukho grout xa usebenzisa iipaneli zodonga lweemabhile ngokungafaniyo xa usebenzisa iithayile. Oku kwenza ukucoca rhoqo kunye nokugcina kube lula kakhulu kumninikhaya.
Iiphaneli zodonga lweMarble zikwenza kube lula ukukhetha ngokuthe ngqo ukuba ungakanani umarble oyisebenzisayo kwishawari yakho. Umzekelo, ngaba uyafuna ukuba ezi paneli zigubungele zonke iindonga zeshawari yakho okanye inye nje? Olu khetho alukuvumeli kuphela ukuba wenze uyilo olukufaneleyo, kodwa ikwavumela ukuba wenze uyilo olufanela uhlahlo-lwabiwo mali.
Ikwavumela ukuba ukhethe iipateni zemabula ezizodwa ezinje zoyilo lwe-mosaic okanye iipateni zesixokelelwano sesiNgesi sokuchukumisa indawo yangasese. Ewe ungasebenzisa iipaneli zodonga lweemabhile ezidlala ngobuhle bendalo bemabhile.
I-Marble tile ihlala isetyenziselwa ukwenza indawo emnandi yokujonga imarble. Nangona kunjalo, kukho ezinye izinto ngaphambi kokusebenzisa i-marble kwindawo yakho yokuhlamba. Ngokuyintloko, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba imigangatho emarmore unokufumana ngokuthe tyaba xa umanzi. Oku kunokwenza iimeko ezinobungozi, ngakumbi kuba ukuba imarble ikumgangatho wakho weshawari, ngokuqinisekileyo uya kuba kuyo xa kumanzi. Iindaba ezimnandi zezokuba kukho iindlela ezimbalwa onokuqinisekisa ngazo ukuba umgangatho wakho weshawa yemabula awutyebanga kangako.
Okokuqala nokuphambili, qiniseka ukuba ugcina imarble yakho icocekile. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukuba kukho into echitheka kumgangatho wakho wemabula yeshawari, yisule ngokukhawuleza. Ayizukungcola kuphela, njengayo nayiphi na enye indawo, ukuchitheka okunje nge-conditioner okanye ukuhlamba umzimba kungenza ukuba umgangatho weemabula ube mnandi.
Unokusebenzisa iimveliso ezichasayo ukunceda ukwenza indawo yakho yokuhlamba yemabula ikhuseleke. Ezinye zazo zezizinto ozifaka ngqo kwimarble ngelaphu ngelixa ezinye zikwimo yematile yerabha oyitsalayo kumgangatho wakho wokuhlamba. Ukuba usebenzisa i-anti-slip application okanye i-anti-slip cleaner endaweni yemethi yerabha, qiniseka ukuba ujonga ukuba kukhuselekile ukuyisebenzisa kwi-marble ngaphambi kokuba uyisebenzise.
Ivanishi esekwe emanzini yenye imveliso ehlala isetyenziselwa ukunciphisa indlela emtyibilizi ngayo ishawari yemabula. Qiniseka ukuba uyisebenzisa ngokubhityileyo, nditsho neebhatyi ukuba uyayisebenzisa ukuqinisekisa ukuba ayichaphazeli umbala wemabhile. Xa usebenzisa ngaphezulu kwengubo enye, qiniseka ukuvumela idyasi yokuqala yome ngokupheleleyo ngaphambi kokongeza enye.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, iimvula zemarble zibuyisela utyalo-mali olwenzileyo ekuqaleni kwexesha kuba awunakukhathazeka ngeendleko zokuzitshintsha. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba akufuneki ukhathazeke ngendleko zokuqala konke konke.
Imabhile emanyeneyo yinto ehlala isetyenziswa kwiishawa. Le yimabhile eyenziwe ngumntu esebenzisa umxube wee-resins kunye neengqimba kwaye zenziwe ukuba zomelele kwaye zikhangeleke. Emva kokuba i-marble ekhethiweyo yenziwe, ibekwa kwiimbumba ukudala imilo efunekayo. Imarble ekhulisiweyo emva koko igqunywe ngejel yokubopha kwaye ipolishiwe ukuze ibonakale ilungile.
Imarble ekhulisiweyo inexabiso eliphakathi kwe- $ 8 ngeenyawo zenyawo nganye kunye ne- $ 24 ngeenyawo zenyawo nganye, kuxhomekeke kwizinto ezinje ngoluphi uhlobo lwemarble oyithengileyo oyithengayo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba yonke imarble inokulungiswa, ke ukuba unokhetho, umzekelo, iCalacatta ngaphezulu kwe-Emperador, unokufumana i-marble ecwangcisiweyo ukuze ihambelane neemfuno zakho.
Iindleko ezongezelelekileyo ekufuneka uzithathele ingqalelo zibandakanya iindleko zokufaka. Ngethamsanqa, i-marble ecwangcisiweyo kulula ukuyifaka. Oku kwenza ukuba iindleko zokufaka ziphantsi ngaphandle kokukunyanzela ukuba unciphise ubuninzi bezinto ozisebenzisayo. Kulabo bangoyikiyo i-DIY okanye bayasebenza xa ujikeleze indlu, ungazama nokuzifakela udonga lokuhlamba.
Ngelishwa, abanye banokudana kukuba i-marble eyakhiwe yenziwe ngumntu endaweni yendalo. Ukuba ufuna ishawa yemabula yendalo, kuya kufuneka uzimisele ukuhlawula iindleko ezongezelelweyo. Ngemirhumo yokufaka, uqikelelo lwale mvula luqala kwi- $ 100 ngonyawo wesikwere ukuya kwi- $ 300 ngeenyawo zenyawo. Kulabo bajonge ukubonakala kwemarble yendalo ngaphandle kwexabiso lentengo, imarble ekhulisiweyo yeyona nto ukubheja kwakho.
Eyona ngxaki inkulu ngemarble ekhulisiweyo yeyokuba kuba inokuba noluhlu olwahlukileyo lwenkangeleko yayo. Uhlobo lwamatye atyunyuziweyo asetyenzisiweyo, ii-resins zemichiza kunye neemeko zokuvelisa zinokuboleka kwimveliso eyahluke kakhulu amaxesha ngamaxesha. Esinye isikhalazo esiqhelekileyo kukuba i-marble ekhethiweyo ifuna ukhathalelo oluninzi ngelixa icoca. Iikhemikhali ezirhabaxa kunye nomphezulu wokukhuhla unokufumana amanqaku, ukukrwela kunye nokonakalisa le mihlaba ukuba akalumkanga. Ukongeza ayisiyiyo yonke imveliso yemarble eyakhiwe ngokulinganayo. Ngononophelo thelekisa abavelisi kwaye ukuba kunokwenzeka ubone imathiriyeli ngokwakho ukuze ujonge umgangatho wayo ngaphambi kokuthenga iziphumo ezilungileyo.
Kungakhathaliseki ukuba uluphi uhlobo lweemabula ozithengayo kwindawo yokuhlambela, yinto efanelekileyo yokwenza uphando malunga nokuba ngubani othenga kuye kwaye ngubani ofaka i-marble. Ukujonga uphononongo lwe-Intanethi kunokunceda ekuqinisekiseni ukuba abathengi bangaphambili bonwabile ngomgangatho wezinto ezinikezelwayo. Umgangatho ubalulekile ukuba ufuna igumbi lokuhlambela elihle.
Iindleko zeendonga zeshawari zemarble ezicwangcisiweyo zahluke kancinane kunexabiso eliphakathi lemarble ekhulisiweyo yeshawari yakho xa iyonke. Kungenxa yokuba iindonga zeshawari zihlala zenziwe ngobukhulu obukhulu kwaye zisikwa ukuze zifanise iimfuno zeshawari ngelixa iipaneli zemarble ezenziwe ngeemigangatho eziqhelekileyo zenziwe ukuba zilingane nobukhulu obuthile.
Iindleko zangaphambili esizijongileyo zezendleko zesilayidi ezingabizi kakhulu kunepani yokuhlamba. Kwakhona, ixabiso eliqikelelweyo lezi slabs zokuhlambela inkcubeko liphakathi kwe- $ 8 ngenyawo lesikwere ukuya kwi-24 yeedola ngeenyawo. Siza kujonga ukuba yintoni ipani yeshawa kwaye ibiza malini ngomzuzwana nje.
Ngenye indlela, ungasebenzisa iithayile zemabhile endaweni yeslabs ukufumana uyilo olunomdla nolulawulwa ngakumbi. Iithayile zeshawari zihlala zibiza phakathi kwe- $ 180 kunye ne- $ 250 ngeenyawo ezingama-50 zeenyawo. Kuba i-marble ibaluleke kakhulu, iyakuxhomekeka esiphelweni solu qikelelo xa kuthelekiswa ne-acrylic okanye i-ceramic tile.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le ndleko inokunyuka xa ufuna izinto ezongezelelweyo kwishawa yakho. Zingakanani ezi zinto zongezelelweyo ziphakamisa iindleko zakho ziya kuxhomekeka kwinto abayiyo kunye nokuba bangakanani marble abayibizayo. Umzekelo, umnini wesepha uya kungena kwiindleko ezongezelelekileyo kodwa ayizukubiza kakhulu njengokufaka isitulo semabhile esenziwe ngamatye kwisitya sakho.
Ikhithi yokuhlambela yemarble - Jonga kwi IAmazon
Ukuba ufuna into elula, unokuhlala uhamba nekhithi yokuhlamba i-marble. Ezi khithi zithengisa kanye le nto uyifunayo ukuphinda uhlambe kwisitya sakho semarble. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izixhobo kunye nezinto ozifunayo ngaphandle kwemarble ekhulisiweyo ayiqhelekanga.
Sikhankanye ngaphambili ukuba iindonga zeshawari zemarble zinexabiso eliphantsi kunepani yetyuwa yemarble ngenxa yokuba iipani zemarble zenziwe ukuba zilingane nemilinganiselo ethile.
Ipani yeshawa ngumgangatho weshawa yakho. Iipani zokuhlambela ziyimfuneko kungekuphela nje ngeenjongo zobuhle kodwa zenzelwe ukuphatha ukufuma rhoqo kwaye ukhetho lwakho kwipani yokuhlamba lunokufumana ubushushu kwishower yakho.
Kwakhona, ekubeni i-marble ibaluleke kakhulu, i-pan ye-marble yokuhlamba iwela kwisiphelo esibi kakhulu. Ukongeza, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba inkulu kangakanani ishawa yakho. I-shawa emikhulu, kokukhona imarble iyafuneka; okukhona imarble ifunekayo, kokukhona indleko ziphezulu. Lilonke, uqikelelo lwepaneli yetyuwa yemarble esuselwe kwi- $ 300 ukuya kwi-600 yeedola.
Olunye uqwalaselo esingakhange sijonge kulo ukuza kuthi ga ngoku kukuba uthenga ezi ziqwenga zemabhile zikhulisiweyo kwi-intanethi okanye ngobuqu. Ukuthenga kwi-venkile kubambe izibonelelo zayo kuba uza kubona imarble kumntu ngaphambi kokuba uthenge. Ukuthenga kwi-Intanethi, nangona kunjalo, kuhlala kulula ukufumana into oyifunayo. Xa kuziwa kwindleko, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iindleko ezongezelelweyo zokuthenga kwi-Intanethi njengokuhambisa. Kuba imarble isindayo xa ithelekiswa nento onokuyithenga ngokwesiqhelo kwaye uthenga ngokwaneleyo ukwenza kwakhona ishawa yakho, kubalulekile ukuthintela umrhumo onzima wokuhambisa.
Njengoko besitshilo ngaphambili, zininzi izibonelelo zokusebenzisa i-marble tile endaweni yeemabhile okanye ii-slabs zakho ishawa yokuhamba-hamba . Kwenye, zibiza iindleko ngokufanelekileyo kodwa zikwanika ithuba lokongeza umaleko owongezelelweyo woyilo kwisitya sakho sokuhlamba.
Olunye ukhetho olunje yitayile yangaphantsi. I-Subway tile ibizwa ngegama loyilo lwethayile oluhlala lusetyenziswa kwizitishi zangaphantsi. Ijongeka kakhulu njengepateni yodonga lwezitena kunye nokusetyenziswa kwethayile kwindawo yezitena. Ungabona eminye imifanekiso Izimvo zethayile yangasese Apha.
Xa usenza uyilo lwethayile yangaphantsi, kuya kufuneka uqiniseke ukuba usebenzisa ulingano kunye nokucwangcisa kwangaphambili. Ngokufanelekileyo, licebo elilungileyo ukucwangcisa kwangaphambili ukunciphisa isixa seethayile ezifuna ukusetyenziswa. Kulapho xa uyilo lweleyitha luqala ukusondela kakhulu emaphethelweni okanye kwikona yeshawa kwaye unyanzelekile ukuba ubambane ne-intshi okanye ezimbini zethayile ukugcwalisa indawo engenanto.
Endaweni yokuqala uyilo lwethayile yakho engaphantsi kwendlela kwikona esezantsi yenxalenye yeshawa yakho, zama i-tile esezantsi ezantsi kolunye lweendonga. Oku kuya kunika uyilo lwakho ukujonga okucocekileyo. Khumbula, awuzitheleli ezi tile ngokugqibeleleyo kunye nenye, ke ukubamba okuncinci ngolu hlobo kuyabonakala.
Ikwangumbono olungileyo ukushiya malunga nesithuba se-intshi ye-between phakathi komqolo wokuqala weethayile kunye nomgangatho weshawa okanye ipani yeshawa. Oku kuya kunceda ukuphendula nayiphi na intshukumo enjengokwandiswa kweethayile ngexesha.
Sithathele ingqalelo kwangethuba ukuba kufuneka ulumke usebenzisa oko ukucoca ishawari yemabhile. Oku ikakhulu kubulelwe ukuba imarble porous is how. Into yokuqala oya kufuna ukuyenza ngaphambi kokuba wenze nantoni na kwisitya sakho semarble, qiniseka ukujonga iwaranti. Olunye unyango luya kulitshitshisa iwaranti yemabhile.
Kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uzikhumbule xa ucoce ishawa yakho yemarble. Ukuqala, sebenzisa kuphela abacoci be-pH abangathathi hlangothi. Ukusebenzisa i-acid, i-acidic cleaners efana neviniga okanye i-citrus-based soaps iyonakalisa i-marble. I-Marble nayo kulula ukuyikrola, ke qiniseka ukuthintela iibrashi ezinqabileyo kunye neziponji zokucoca.
Nangona kunokuba kunzima ukukhumbula ukwenza okokuqala, qiniseka ukuba usula i-marble shower xa usebenzisa. Intsalela evela kwiimveliso zeshawari iya kuyenza ibala lemarble. Olona khetho lufanelekileyo kukusebenzisa itawuli ye-microfiber ukusula ishawa emva kokusetyenziswa ngakunye.
Emva koko, kukho ukucoca rhoqo ishawa. Kukangaphi kufuneka uyenze le nto kuya kuxhomekeka ekubeni uyisebenzisa kangaphi kodwa kube kanye ngeveki okanye kanye ngeveki enye isemgangathweni. Into efanelekileyo oyisebenzisayo ukucoca ishawa yakho ngumxube wepunipoon ye-1 yesepha yesitya esincinci kwibhotile yokutshiza nayo yonke ibhotile izele ngamanzi. Kwakhona, uya kufuna ukusebenzisa ilaphu lokucoca i-microfiber.
Ukuba uneetayile zemabhile, kuyakufuneka ucoca i-grout phakathi kwazo. Iindaba ezimnandi zezokuba kukho iindlela zokucoca i-grout engathathi iiyure zomzamo. Izinto eziphambili ozifunayo ngamanzi afudumeleyo, ibrashi eyomeleleyo, kunye nesoda yokubhaka.
Inyathelo lokuqala oza kufuna ukulilandela kukuntywila ibrashi yakho emanzini afudumeleyo emva koko nentwana yesoda yokubhaka. Hlikihla oku kwi-grout ngokuhamba kancinci uze uhlambe i-grout ngamanzi ashushu ngaphambi kokuba usule. Qiniseka ukuba awukhuhle okanye ufumane nayiphi na isoda yokubhaka kwimarble uqobo.
Ukufumana i-grout yakho icocekile ngakumbi, inyathelo elilandelayo kukuxuba amanzi kunye nesoda yokubhaka kwi-paste. Gcoba le ncamathela kwi-grout, kwakhona, uqiniseke ukuba ungafumani nto kwi-tile. Yiyeke yome kwaye usebenzise ilaphu elimanzi ukuze uyihlambe de kube umxube uphelile kwithayile.
Ukuthintela isepha yokufumba kwixa elizayo unokuzama ukosula ishawa ngesitshizi emva kokusetyenziswa ngakunye.
Kukho ulondolozo lokugcina ishawa yemabula kodwa ayoyiki. Ngokuyintloko, kuya kufuneka uphinde uthengise imarble minyaka le ukuze uyigcine ikwimeko ephezulu. Ungathenga i-marble sealant kwi-intanethi nakwiindawo ezininzi zeevenkile.
Ukusuka apho, landela nje imiyalelo kwisitywina sokutywina ishawa yakho. Yinto elula ye-DIY ekufuneka uyenze kube kanye ngonyaka, ke ayisiyothintelo olukhulu ekukhetheni ishawa yemabula.
Ndwendwela eli phepha legalari ukubona okungakumbi uyilo lweshawa esinexabiso eliphezulu ukufumana ezinye izimvo kunye nokuvuselelwa kokuvuselelwa.
kunye nesicakakazi sobukhulu besinxibo sokubonisa imbeko
umntu ophethe iringi kufuneka abe mdala kangakanani
Izipho zekrisimesi zoomamazala
ohlawula ikhekhe labakhwenyana